Lamaody :: Mampanantena hetsika mamirapiratra ny « Modus Mode » • AoRaha
Lamaody Mampanantena hetsika mamirapiratra ny « Modus Mode »
Nigadona ny lanonana goavana natokana ho an’ny lamaody etsy amin’ny Alliance Française (AFT) Andavamamba. Hasehon’ireo mpandray anjara amin’ny « Modus Mode » nanomboka ny 2 desambra hatramin’ny 7 desambra ho avy izao fa manana ny kalitaony sy tsy mitsanga-menatra manoloana ny asam-pamoronana maneran-tany ny aingam-panahy malagasy. Ny fanentanana hanjifa ny vita Malagasy rahateo no tanjona.
Efa nahitana taratra an’ireo endriky ny fivoaran’ ny lamaody malagasy ny fotoam- panokafana. Maro ireo andrarezina, toa an-dry Michael Vida, Gaona, Tafitia, Emy Ga izay nanolotra ny asam-pamoronany vaovao. Teo ihany koa ireo vao misedra sehatra kanefa efa nahazo fankasitrahana avy amin’ireo mpanatrika sahady.
Mbola maro ny hiandry ireo mpitsidika hatramin’ny 7 desambra. Hisy ny filatroana, hisy ny atrikasa ary ny fampirantiana. Nanomboka omaly ny atrikasa izay hiresahana momba ny famoronana lamaody, ny filatroana ary ny famoronana orinasa. Hotanterahina amin’ ny zoma 6 novambra ny alim-pifaliana goavana izay ivon’ity hetsika ity.
Famoahana rakitsary Mampahafantatra ny « Aza aila » i Big MJ
Kanto ankehitriny Manolotra fampirantiana isan’andro ny Fondation H
Fotoanan’ny fihibohana Hanolotra seho ao amin’ ny « Facebook » ry Shyn
Fialam-boly Tantara an-tsary valo azo vakiana amin’ny aterineto
Vakodrazana sy Kolon- tsaina
Sombintantara an-tsehatra :: Navadiky ny « Bee z’art » ho teatra ny « Antaranoana »